Decoupage केस्केट: मास्टर वर्ग
धेरै सुत्केरी महिलाहरु decoupage को प्रविधि मा घर को लागि आफ्नो चीज बनाउन प्यार गर्छन। कलाकारहरूको लागि पसलबाट decoupage प्रयोग वा विशेष नापको लागि, वा कुनै मनपर्ने, जसले आर्थिक विभागहरूमा बेच्न सक्छ। हामी हाम्रो मास्टर क्लासमा एक प्रकारको विशेष गरी यस प्रकारका कामका लागि डिजाइन गरिएको प्रयोग गर्दछौं।
काठको कास्कीको Decoupage
एक साधारण, अपरिचित मार्कर बक्सको decoupage लाई सजाने को लागी, हामी निम्नलिखित सामाग्री को आवश्यकता हुनेछ:
काठको क्यास्क स्टक, हाम्रो अवस्थामा सबैभन्दा सामान्य कास्की;
decoupage को लागि चिपकने वाला;
दुई चरण चक्रवर्ती;
ग्लुको लागि potali;
मोम खाली गर्नुहोस्।
काठ कोस्कट्स को decoupage मा मास्टर वर्ग
यस मास्टर वर्गमा हामी उत्कृष्ट decoupage बक्स बनाउन कसरी सजिलो र सरल तपाईंलाई देखाउँछौं।
1. सबै भन्दा पहिले, हामी workpiece को प्राथमिक प्रकृया सुरु, यो कि बक्स हो। यसको लागि हामी छाला प्रयोग गर्न आवश्यक छ। हामी बक्सलाई स्यान्ड पेपरको साथमा घिउन्जेलसम्म पुग्न सकेनौं।
2. अब हामी हामी बक्सको कुन भागहरूलाई ब्लट गर्न आवश्यक छ भनेर निर्धारण गर्छौं, यो पेटीको रङ्गलाई पछाडि पेंटको प्रयोग गर्दछ। हामी बाकसको शीर्ष दाग गर्न आवश्यक छैन, किनभने यो नैपकिनको साथ सजाय हुनेछ। क्रम मा यसलाई दाग गर्न को लागी, हामी यसलाई पेंट टेप संग सील गर्दछ।
3. अब हामी कास्केट सफा गर्नेछौं। यो राम्रो छ यो लगातार, धेरै रंगहरूमा, ढाँचामा उपयुक्त छ। दाग एक्रिलिक प्यान्ट र ग्लेजिंग माध्यमको मिश्रणबाट बनाइन्छ, जसले पनी पारदर्शिता दिन्छ। छाया मिलाउनुहोस्, पियानोको पछि केटीको कपालको रंग।
4. एक ब्रश प्रयोग गरेर, हामी क्यास्केट पुछिन्छौं, यसलाई सुक्न दिनुहोस्।
5. अब दोस्रो रातको पोशाक जस्तै एक रातो रातो छाया मिलाउनुहोस्। कास्की एकदम अँध्यारो छ।
6. अन्तमा हामी गहिरो रङ्ग प्रयोग गर्दछौं, बाकस छोपेर सुत्न दिनुहोस्।
7. त्यस पछि, तपाईं बक्सको छेउमा केही थोपा टाँस्न सक्नुहुनेछ, यसैले तिनीहरूलाई ब्लिडिङ गर्दै।
8. हामीले टोनमा बक्स पार्यौँ, पियानोमा केटीहरूको छविको टोन नजिक। Decoupage कार्डको लागि यो समय हो। बक्सको साइज अनुसार कार्ड काट्नुहोस्।
9। पानीमा केही मिनेटको लागि decoupage नैपकिन साबुन गर्नुहोस्। यसले ग्लूको लागू गर्नु अघि फोटो खिच्न मद्दत गर्नेछ। यदि हामी गर्दैनौं भने, चित्रले उज्ज्वल प्रक्रियाको समयमा खिच्न सुरु हुनेछ र बुलबुले देखा पर्न सक्छ।
10. जब नापकिन समय बर्बाद नगरी भिजेको छ, यो gluing को लागि आवश्यक सबै तयार गर्न सम्भव छ। ग्लुको साथ आवरण स्नेहन गर्नुहोस्, चित्रलाई ब्लुगाउ गर्नु अघि कागजलाई टाँस्नुहोस्।
अब अब डिस्कोपैप नैपकिन ग्याँसको ढोकामा गइन्छ।
12. मोटो छाला प्रयोग गरी, नैपकिनको अतिरिक्त किनाराहरू हटाउनुहोस्।
त्यस पछि, decoupage नक्सा सावधानीपूर्वक सुचारु र यसलाई गोंद-वार्निशको अर्को तहमा राख्नुहोस्। बाकस सुक्नुहोस्।
14. क्रेकेलरको पहिलो तह लागू गर्नुहोस्। यो सिङ्ग्रो गतिमा फैलिएको एक पतली तह संग यो तपाईंको औंला संग सिधा आवेदन गर्न सबै भन्दा ठिक छ।
15. त्यसपछि, आधा घन्टाको लागि पर्खनुहोस्, पहिलो तह पारदर्शी हुनेछ। तपाईं दोस्रो तह लागू गर्न सक्नुहुन्छ। यो रंगमा ब्रैलीश हो, गाम अरबीको जस्तो, धेरै तरल। तपाईंले यसलाई लागू गर्नु पर्दछ, कुनै पनि मामलामा धेरै बोल्दै। लेयर सम्भव रूपमा पतली रूपमा लागू गरिन सक्छ, किनभने मोटो तह कहिलेकाहीँ दरबारहरूको निर्माणको समयमा पेलो बन्द हुन्छ, यसले सम्पूर्ण कास्केटलाई ध्वस्त गर्नेछ।
16. अब तपाईलाई 3-4 घण्टा पर्खनु पर्दछ, जब तक कि फटाफुल पूर्णतया सूखी छ र सुन्दर दरारको सञ्जालमा राख्छ।
17. अर्को, दरारहरूलाई मर्यो। यहाँ तपाईंलाई सावधान रहनु आवश्यक छ - अधिकांशतया अवस्थामा, कचौरा पानी पानी घुलनशील छ, त्यसैले पानी वा नम औंलाहरूको ड्रप बदसूरत प्रिन्ट छोड्न सक्दछ। त्यसोभए दरबारहरू कपासको प्याडको साथमा राम्रोसँग रगत गर्नुहोस्। ग्राउन्टको रूपमा, तपाईं एक वर्णक, तेल वा बज्जन लिन सक्नुहुनेछ। परिपत्र गति मा रूबी, डिस्क मा एक सानो वर्णक ले।
18. हामी एरोरोल वार्निशको साथ क्रेकेल्युल तय गर्दछौं, यो धेरै तहहरू लागू गर्न राम्रो छ।
1 9। अब सम्पूर्ण काठको बक्सहरू भाँडामा राख्नुहोस्।
20 यस चरणमा, तपाईं रोक्न सक्नुहुन्छ - हाम्रो decoupage बाकस तयार छ र वार्निश संग ढाकिएको छ। तर आइतबार, सजाय जारी राख्न प्रयास गरौं, यसलाई पुरानो चीजको उपस्थिति दिँदै, आलुको टुक्रा प्रयोग गरेर।
21. प्यालेटमा सानो ग्लुङ लगाउनुहोस् र आकृति वरिपरि बक्सको छेउमा हल्का रमाईलो र थोडा पक्षहरूमा थोडा।
22. जब ग्लुको पारदर्शी हुन्छ, पितल लागू गर्न सम्भव छ: पाना लागू गर्नुहोस् जहाँ ग्लुङ लागू गरियो र हल्का रूपमा नरम ब्रश संग थिच्नुहोस्। इलेक्ट्रोनिक ब्रश संग जार देखि पातहरु लाई लिन को लागी धेरै सुविधाजनक छ।
23. जब प्यान्ट ग्लुको सबै बूंदोहरूमा लागू हुन्छ र यसलाई जोडिएको छ, तपाईं क्यास्कटबाट थप हटाउन र भविष्यको कामको लागि तिनीहरूलाई जारमा फर्काउन को लागि "विरोधी ऊन" आचरणहरू, एउटै ब्रश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र काम आफैलाई गोल्डेन वार्निशको धेरै तहहरूसँग तय गरिएको छ। यहाँ तपाईं एक्क्रेलिक लेक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, जसमा पोटेशियम थोपा पछि थोपा हुन्छ।
24. अब बक्सलाई एक सानो तांबेको लुगा दिनुहोस्। यसले प्यालेट, मोम र तांबेको चित्रको आवश्यकता पर्दछ।
25. सुचारु सम्म मोम र एक सानो वर्णक मिलाउनुहोस्।
26. मोमले ब्रश वा स्पंजको साथ काममा रूकाउनुहोस्।
27. केही घण्टा पछि, नरम कपडाको साथ कास्की पोलिश। भित्रबाट, क्यास्केट काउन्टरको उद्देश्यको आधारमा प्रशोधन गरिएको वा बायाँ छोडिएको छ।
28. अब कास्केट तयार छ।
कसरी आफ्नो हातमा स्यान्डलहरू सजाय गर्ने?
अखबार ट्यूबहरू बनाइएको फ्रेम
Manishka सुई बुनाई
मोती को कैक्टस - मास्टर क्लास
आफ्नो हातले विवाहको लागि बक्स बक्सको लागि - फोटो सहित मास्टर क्लास
तिम्रो हातले शामको लुगा
अखबारको ट्यूबबाट भाडाहरू
स्फूर्तिको लागि क्रिशट ढाँचा
बच्चाहरुका लागि आफ्नै हातहरू
शंकुहरूको व्यवस्था "गिलहरी"
आफ्नै हातले पैसाको लागि बक्स
एक crochet संग एक bolero कसरी टाई गर्ने?
आफ्नो हातले बोतलबाट गुड
आफ्नै हातमा सजावट बोतलहरू
यो सबैले वेलेंटाइन दिवसमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो
महिलाहरु को फर चिकना जैकेट
सर्दका लागि सेमहरूसँग आइपुग्ने - भविष्यको प्रयोगको लागि सब्जियां फसलको लागि उत्तम व्यञ्जनहरू
कफीको लागि कफी - कोमल छोडेर कर्लहरूको सुधार
सुन्दर मैनीक्योर 2015
कसरी चुरोट लगाउने - 28 तस्बिरहरूले सुन्दर रूपमा टिपेट टाई गर्न मद्दत गर्नेछ
स्तन दूधको वोसो सामग्री कसरी वृद्धि गर्ने?
Ovulation को लागि बेसल तापमान के छ?
चिन्ताको साथ सलाद - छुट्टी र सबै दिनको लागि सबैभन्दा स्वादिष्ट र उत्तम व्यंजन व्यंजनहरू
खुट्टामा छालाको छाला
घर मा व्युत्पन्न Varenets
प्लास्टिक टुक्रा टुक्रा
प्यारी सेलेना गोमेज गायकका बुबाको जस्तै छ
ग्रीसमा भिसाको दर्ता
कोट Pavlovskaya kerchiefs
Duodenal ulcer - लक्षणहरू
हिड्ने - कसरी हिंड्ने अभ्यास?
भ्रष्टाचार - कसरी परिभाषित गर्ने?